I-3BHK Villa kanokusho enechibi langasese e-Goa
Jabulela ukuhlala kwakho nedamu lokubhukuda. Sitholakala enhliziyweni yeGoa endaweni ebukekayo kakhulu, kodwa ephilayo futhi etholakala emizuzwini embalwa ukusuka ebuhleni obumangalisayo bamasonto, izikhumbuzo nokunye okuningi. Amakamelo okulala anikezwe isivakashi ane-air conditioning, avulekile, anemibhede elingana nenkosi, izibani zesimanje kanye namagumbi okugeza e-en-suite. Zonke izindawo ze-Villa zifinyeleleka kuzivakashi. Siphinde sibe nekhishi elihlome ngokuphelele.
Le yindlu eyi-3 BHK, ezungezwe umgwaqo obheke eNyakatho Goa usuka esikhumulweni sezindiza.
I-air conditioner kuwo wonke amagumbi okulala
Ikhishi elinezinto zokusika nezitsha
3 amagumbi okugeza avulekile, ahlanzekile
Itafula Lekhofi Nezihlalo
2 amakhishi ahlome ngokuphelele
2 amagumbi okuhlala
120 sq.mt ichibi lokubhukuda
Ama-TV ama-5 anebhokisi le-Airtel XTREME nokuhlinzekwa kwe-OTT
Le Villa inakekelwa kahle kakhulu inemibhede elingana nenkosi enethezekile ekamelweni ngalinye. Siphinde sinikeze izihambeli ezengeziwe ngomatilasi baphansi ngemva kwezivakashi ezingu-6. Kunamagumbi okugeza angu-3. Izindlu zokugezela zinamanzi agelezayo ashisayo nabandayo.
Uzoyithokozela indawo ozoba nayo ngenkathi uhlala kule Villa.
Umakhelwane ukahle. Sinendawo ezolile kude nempilo yedolobha ematasa. Sizungezwe uhlaza nezinyoni.
Ngihlala ngitholakala ocingweni noma ezingxoxweni. Chofoza kunketho ethi "thintana nomsingathi" uma unokuthile ongakubuza ngaphambi kokubhuka. Ngizozama futhi ngikusize ngakho konke engingakwenza ngesikhathi sokuhlala kwakho.